नोकिया Plus प्लस सेप्टेम्बरमा एन्ड्रोइड पाई प्राप्त गर्नेछ
हिजो हामीले दक्षिण अफ्रिकाबाट आएको समाचारलाई प्रतिबिम्बित गर्यौं, जहाँ कम्पनीका प्रवक्ताले बताइए कि Huawei P20, यसको सबै भेरियन्टहरूमा, नोकिया Plus प्लस, जसले सेप्टेम्बरको महीनाभरमा एन्ड्रोइड पाईमा अपडेट प्राप्त गर्दछ, यो हुनेछ। स्न्यापड्रैगन 7० को साथ पहिलो स्मार्टफोन यसलाई प्राप्त गर्नका लागि।
ट्रान्समार्ट एलिमेन्ट पिक्सी ब्लुटुथ स्पिकर समीक्षा
हामीले ट्रान्समार्ट एलिमेन्ट पिक्सीको परीक्षण गरेका छौं, एक ब्लुटुथ स्पिकर जसले अध्ययन गरिएको डिजाइन, पर्याप्त स्वायत्तता र धेरै पावर प्रस्ताव गर्दछ।
क्याभियार सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट १ किलोग्राम सुनको साथ आउँछ र यसको लागत ,9०,००० युरो हुन्छ
क्याभियारले एक सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट prepared तयार गरिसक्यो जुन एक किलोग्राम सुनको पछाडि 9०,००० यूरोको मूल्यमा छ। पत्ता लगाउनू!
ग्यालक्सी नोट १० सबैभन्दा प्रख्यात धीरज परीक्षण पार गर्दछ
ग्यालक्सी नोट जेरीRigE Everything धीरज परीक्षण पास। यस परीक्षणको बारे अधिक जान्नुहोस् जुन सामसु'sको उच्च-अन्तले अधीनमा छ।
OUKITEL K8 पहिले नै ठूलो लाभका साथ पूर्व बिक्रीमा
पहिले नै अगस्त २ 27 सम्म पूर्व बिक्रीमा OUKITEL K8 २०% छुट, "" स्क्रिन, GB जीबी र्याम, OM 20 ROM को, र डुअल क्यामेरा एक सुपर मूल्यमा
Huawei Mate 20 मा ट्रिपल रियर क्यामेरा हुनेछ
Huawei Mate 20 मा ट्रिपल रियर क्यामेरा हुन गइरहेको छ। चीनियाँ ब्रान्डको उच्च-अन्तको बारेमा अधिक जानकारी पाउनुहोस् जुन शरद inतुमा आउँदछ।
Vivo X23 का नयाँ चित्रहरु फिल्टर गर्नुहोस्
Vivo X23 को नौंच र डबल क्यामेराको साथ अन्तिम डिजाइन प्रकट गर्‍यो। चाँडै आउँदै गरेको चिनियाँ ब्रान्डबाट नयाँ फोनको बारे अधिक जान्नुहोस्।
फोन, ट्याब्लेट वा phablet? Honor 8X, एक स्मारक स्क्रीन संग एक उपकरण को पुष्टि गर्दछ
ऑनरले केवल Honor 8X, ब्रान्डको अर्को मोबाइल ठूलो स्क्रिनको साथ अवस्थित रहेको पुष्टि गरेको छ। हामी तपाईंलाई खबर विस्तार!
सियाओमी पोकोफोन एफ 1 फेरि गीकबेन्च हुँदै जान्छ, यस पटक GB जीबीको र्यामको साथ छ
शाओमी पोकोफोन एफ 1 गीकबेंच मार्फत GB जीबीको र्यामको साथ जान्छ। यो नयाँ बेन्चमार्क उपस्थिति को बारे अधिक जान्नुहोस्!
ग्यालक्सी नोट reser रिजर्भेसन ग्यालेक्सी S9 भन्दा बढी छ
अगस्त August मा, सामसु fromका कोरियालीहरूले आधिकारिक रूपमा नयाँ ग्यालक्सी नोट presented प्रस्तुत गरे, टर्मिनल जुन बजारमा सुधार गर्न प्रयास गर्न आउँदछ धेरै कोरियन मिडियाका अनुसार ग्यालक्सी नोट of को भण्डार ग्यालक्सी एस by द्वारा प्राप्त गरेको भन्दा बढि छ आधिकारिक रूपमा परिचय थियो।
जेडटीईले भर्खरै xक्सन, को उद्घोषणा गर्ने पोष्टरको खुलासा गरेको छ, एक्सनको उत्तराधिकारी 9.। फर्मले हाम्रो लागि भण्डार गरेको छ कि खोज्नुहोस्!
हुवावे पी २० सेप्टेम्बरभर एन्ड्रोइड पाईमा अपडेट हुनेछ
प्रत्येक पटक कुनै निर्माताले नयाँ टर्मिनल सुरू गरेपछि यो वर्षको कुन समयमा निर्भर हुन्छ, धेरै प्रयोगकर्ताहरू जसले गतिलाई ध्यानमा राख्छन् दक्षिण अफ्रिकामा हुआवेईका प्रवक्ताले घोषणा गरे अनुसार Huawei P20 ले Android P प्राप्त गर्नेछ। बर्ष सेप्टेम्बर महिना
नोकिया with को साथ खिचिएका पहिलो फोटोहरू प्रकाशित गरियो
नोकिया camera क्यामेराको पहिलो फोटोहरू यहाँ छन्। उच्च फोटो क्यामेराको साथ लिइएको यी फोटोहरूको बारेमा बढि जानकारी लिनुहोस्।
शाओमी मी मिक्स of का फिल्टरहरू नयाँ रेन्डरहरू
Xiaomi Mi MIX tered मा फिल्टर गरिएका नयाँ रेन्डरहरू। चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ उच्च-अन्तको डिजाइनको बारेमा अधिक जानकारी लिनुहोस् जुन केही महिनामा आउँनेछ।
हुवावे नोवा and र i आई अर्को हप्ता देखि भारतमा आइरिस पर्पल रंगमा बेचिनेछ
Huawei Nova3र Nova 3i आईरिस बैजनीमा भारतमा अर्को हप्ता देखि शुरू हुनेछ। पत्ता लगाउनू!
हुवावे पी २० प्रो आईएफए २०१ two मा दुई नयाँ रंग प्रस्तुत गर्दछ
हुवावे पी २० प्रोले आईएफए २०१ 20 मा दायरामा दुई नयाँ र addहरू थप्नेछ। चिनियाँ ब्रान्डको उच्च-अन्तको नयाँ संस्करणको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस्।
हुवावे मेट २० लाइटले प्रोसेसरको रूपमा किरिन 20१० प्रयोग गर्नेछ
हुवावे मेट २० लाइटले किरीन 20१० प्रोसेसर बोक्नेछ।चिनई निर्माताबाट नयाँ फोनको बारेमा अधिक जानकारी लिनुहोस्, जुन विवरण हामीलाई आउँदैछ।
ZTE आईएफए २०१ at मा Axon9प्रस्तुत गर्न सक्छ
जेडटीईले एकोन officially लाई आधिकारिक रूपमा आईएफए २०१ present मा प्रस्तुत गर्ने छ। फर्मले प्रस्तुत गर्ने नयाँ फोनको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
वनप्लस T टी अक्टूबरमा सुरू हुन्छ जुन मूल्यमा बृद्धि भएको छ। चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ उच्च-अन्तको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
सोनीले फोनहरूले एन्ड्रोइड .9.0.० पाई प्राप्त गर्ने मितिहरू प्रकट गर्दछ
सोनीले फोनहरूको सूची र मितिहरू प्रकट गर्दछ जुन Android। .० पाई प्राप्त गर्दछ। यस नयाँ ओएसको मजा लिने उपकरणहरूबारे जान्नुहोस्!
सोनी एक्सपेरिया एक्सए Plus प्लस भर्खर गीकबेन्च बेन्चमार्कमा चुहावट भयो। यो अर्को फोनको साथ सोनी स्टोरमा के छ पत्ता लगाउनुहोस्!
डिस्प्लेमेटका अनुसार ग्यालेक्सी नोट of को स्क्रीन टेलिफोनीको संसारमा सब भन्दा राम्रो हो
हालसालैका वर्षहरूमा हामीले हेर्‍यौं कि कसरी प्रमुख उत्पादकहरूले वार्षिक आविष्कारहरूको साथ राख्न सक्दैनन् र सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट of को प्रदर्शनमा शर्त लगाउन छनौट गरिसकेका छन्, फेरि एकपटक पुष्टि गरियो कि सामसु Samsung विश्वको सर्वश्रेष्ठ प्यानल निर्माता हो।
हुवावेको किरीन 980० को कर्टेक्स-ए c c कोरहरू छैन, तर एआरएमको कर्टेक्स- A77 will हुनेछ।
Huawei अर्को प्रोसेसर, HiSilicon किरीन 980, चार Cortex-A77 कोर, तर चार Cortex-A76 कोर संग सुसज्जित हुनेछ। पत्ता लगाउनू!
Huawei Nova3एक महिना मा दुई लाख एकाइहरु बेचेको छ
Huawei Nova3बेचिएको दुई मिलियन युनिटहरू। चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ मोडलहरूको सफलताको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
सामसु forको लागि तालीको एक दौर: यसको उच्च-अन्तले सुरक्षा वर्षौं एक महिना को लागी एक बर्ष प्राप्त
हामी यस समाचारका बारे खुशी हुनुहुँदैन, किनकि यो प्रत्येक निर्माताको लागि आवश्यक हो, तर धेरैको अभावका कारण हामी यसलाई ग्यालक्सी एस S / S8 मा हाइलाइट गर्दछौं।
Mbuynu टच TWS, एयरपड्स-स्टाइल हेडफोन केवल € ...36.99 को लागि the 38% छुटमा धन्यवाद तपाईंले € २ save बचत गर्नुभयो।
Mbuynow इन-ईयर हेडफोन, टच TWS कम लागत एप्पल एयरपड्स-शैली हेडफोनहरू स्वीकार्य ध्वनि गुण र शक्ति संग छन्।
Mbuynow, केवल € 35.99 को लागि सबै भन्दा राम्रो HD आईपी क्यामेरा यसको 40% छुट तपाईं discount 24 बचत
म तपाईंलाई सल्लाह दिन्छु कि यस Mbuynav IP HD क्यामेराले प्रदान गरेको सबै कुरामा एक नजर राख्नुहोस् किनकि तपाईं पक्कै पनि यसलाई उडाउन जाँदै हुनुहुन्छ।
गुगलले स्क्रिनको साथ स्मार्ट स्पिकर सुरूवात गर्दछ
गुगलले यस बर्ष एक स्क्रीनको साथ एक स्मार्ट स्पिकर शुरू गर्नेछ। यस गिरावटमा आउँदै गरेको कम्पनीको नयाँ स्पिकरको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
नोकियाले आफ्नो नया फोन अगस्त २१ मा प्रस्तुत गर्नेछ
नोकियाको नयाँ फोन अगस्त २१ मा खोलिएको छ। ब्राण्डको नयाँ फोन, सम्भवतः नोकिया 21 को बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
नोकिया Plus प्लसले सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता फोनको कोटीमा EISA पुरस्कार जितेको छ
नोकिया Plus प्लसले बजारमा सबैभन्दा सिफारिश गरिएको मोबाइलको लागि EISA पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। यो महत्त्वपूर्ण पुरस्कार को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्!
ग्यालक्सी नोट ले अगस्त सुरक्षा प्याच प्राप्त गर्दछ
अगस्ट सेकुरिटी प्याच ग्यालक्सी नोट is मा आउँदैछ। प्याचको बारेमा पत्ता लगाउनुहोस् जुन यी दिन सामसु'sको उच्च-अन्तमा हिट गर्दै छ।
गुगल आफ्नो फिटनेस सहायक मा काम गर्दछ
गुगल कोच: गुगल फिटनेस सहायक। सहायकको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जुन कम्पनीले निकट भविष्यमा सुरू गरिरहेको छ।
Vivo X23 कुञ्जी चश्मा लीक भयो: थ्रीडी अनुहार पहिचान र अधिक
Vivo X23 का मुख्य सुविधाहरू यसको प्रस्तुतीकरण अघि फिल्टर गरिन्छ। यस मोबाइलले हामीलाई के ले ल्याउँदछ भन्ने बारे थप जान्नुहोस्!
Honor 8X: Honor को नयाँ ठूलो स्क्रीन फोन लीक भयो
Honor 8X को पहिलो विशिष्टता फ़िल्टर गरियो। यो फोनको बारेमा अधिक चीनियाँ निर्माताबाट फेला पार्नुहोस् जुन यसको ठूलो स्क्रिनको लागि खडा छ।
हुवावे मेट २० अक्टूबरमा आइपुग्नेछ
हुवावे मेट २० आधिकारिक रूपमा अक्टोबरमा प्रस्तुत हुनेछ। चिनियाँ निर्माताबाट फोनको नयाँ दायरा बारे अझ बढी पत्ता लगाउनुहोस् जुन यो गिरावटमा आउँछ।
सामसुले Exynos 5100१०० घोषणा गर्दछ, फोनका लागि विश्वको पहिलो G जी मोडेम
दक्षिण कोरियाली कम्पनी सामसु Samsungले एक्सीनोस 5100१०० अधिकारी बनाएको छ, विश्वको पहिलो G जी मोडेम। हामी तपाईंलाई खबर विस्तार!
Wavefun सुपर X प्लस 6-एकाइ एक्सप्रेस सस्ता समीक्षा
शाओमी मी ए २ ले यस महिनाको अनुरूप अपडेट प्राप्त गर्दछ, यस प्याचले ल्याएको समाचारको बारेमा बढि जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्!
सियाओमी पोकोफोन एफ 1 ले जीकबेन्चमा यसको प्रतिस्पर्धालाई नष्ट गर्दछ
शाओमी पोकोफोन एफ १ को पहिलो प्रदर्शन परीक्षण गीकबेन्चमा देखा पर्‍यो, परिणामहरूले तपाईंलाई चकित पार्नेछ
ब्ल्याकबेरी KEY2 LE आईएफए २०१ un मा खोलिनेछ
ब्ल्याकबेरी KEY2 LE आधिकारिक रूपमा IFA 2018 मा प्रस्तुत हुनेछ। नयाँ कम्पनी फोनको प्रस्तुतीकरणका बारे अधिक जान्नुहोस्।
एलजी अर्को सालको लागि G जी फोनमा काम गर्दछ
LG ले आफ्नो पहिलो5जी फोन २०१ 2019 को उत्तरार्धमा सुरू गर्नेछ। कोरियाली कम्पनीको यस मोडेलको योजनाको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस्।
विपक्ष F9 प्रो विशिष्टता लीक
नयाँ OPPO F9 Pro का विशेष विवरणहरू फिल्टर गर्नुहोस्। चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ फोनको बारेमा अधिक जानकारी पाउनुहोस् जुन एक हप्तामा प्रस्तुत गरिन्छ।
शाओमी मी प्याड Plus प्लस आधिकारिक हो: १०.१ ″ स्क्रीन, ,,२4० एमएएच ब्याट्री र अधिक
शियोमीले भर्खरै नयाँ ट्याब्लेट आधिकारिक बनाएको छ: मी प्याड Plus प्लस। यो १०.१ ईन्च स्क्रीन र एक विशाल ,,२4० एमएएच ब्याट्रीको साथ आउँदछ।
Huawei Kirin 980 का सबै टेक्निकल स्पेसिफिकेसनहरू फिल्टर गरिएका छन्
Huawei को अर्को प्रोसेसरको HiSilicon Kirin 980 को टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स भर्खरै चुहावट भयो। यस SoC को बारे मा बढि जान्नुहोस्!
एन्ड्रोइड .9.0 .० पाईमा अपडेट गर्न पहिलो नोकिया फोनहरू पत्ता लाग्यो
यी एन्ड्रोइड .9.0.० पाई भएको पहिलो नोकिया फोनहरू हुनेछन्। कुन मोडेल अपग्रेड गर्न पहिलो हुनेछ भनेर खोज्नुहोस्।
सामसु'sको फोल्डिंग मोबाइल अपेक्षा भन्दा पहिले आउँनेछ
सामसु'sको फोल्डेबल फोन अपेक्षित भन्दा चाँडो आउँदैछ। यो फोन को आगमन को बारे मा सूचित अफवाहहरु को बारे मा अधिक खोज्नुहोस्।
शाओमी रेडमी and र रेडमी A ए स्पेन आइपुग्छ
शाओमी रेडमी and र रेडमी A ए आधिकारिक रूपमा स्पेनमा सुरू गरियो। दुई तल्लो फोनको सुरुवातका बारे अधिक जान्नुहोस्।
शाओमीले भारतमा बिक्रीमा सामसु Samsungलाई पछाडि छोडिदियो
शाओमी भारतमा सब भन्दा राम्रो बिक्रेताको रूपमा सामसुpasलाई पछाडि पारे। भारतमा कोरियाली फर्मको बिक्रीको बारेमा बढि जान्नुहोस्, बढ्दो महत्त्वपूर्ण बजार।
अल्काटेल now अब आधिकारिक छ: यसको विशिष्टताहरू जान्नुहोस्
अल्काटेल:: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। आज अनावरण गरिएको निर्माताबाट नयाँ फोनका बारे अधिक जान्नुहोस्।
ओप्पो आर १ official आधिकारिक हो: .17..6.4 ″ AMOLED notch, SD670 र अधिकको साथ। यसलाई जान्नुहोस्!
ओप्पो आर १ कम्पनीले भर्खरै यसको चिनियाँ वेबसाइटमा खुलासा गरेको छ। नयाँ मोबाइलको सबै प्राविधिक विवरणहरू खोज्नुहोस्!
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट of को वालपेपर डाउनलोड गर्नुहोस्
प्रत्येक चोटि नयाँ टर्मिनलले बजारमा हिट गर्दछ, धेरै गहन एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरू हुन् जसले समावेश गरीएको वालपेपरमा हेर्छन् यदि तपाईले नयाँ वालपेपरलाई मन पराउनुभयो जुन हामीले ग्यालक्सी नोट of को प्रस्तुतीकरणमा देख्यौं, तब हामी डाउनलोड गर्नका लागि लिंकहरू देखाउछौं। उनीहरु।
OUKITEL WP2: फोन जसले पानीको उत्तम प्रतिरोध गर्छ
OUKITEL WP2: सबैभन्दा वाटरप्रूफ फोन। सेप्टेम्बरमा आउने चिनियाँ ब्रान्डबाट यो नयाँ मोडेलको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
POCOPHONE F1 अगस्त २२ मा भारत मा प्रस्तुत गरिनेछ
POCOPHONE F1 अगस्त २२ मा भारत मा अनावरण हुनेछ। चिनियाँ ब्रान्डको उच्च-अन्तको प्रस्तुतीकरण मितिको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
केहि पिक्सेल XL का द्रुत चार्जिंगको साथ समस्या छ
पिक्सेल XL भएका प्रयोगकर्ताहरूको द्रुत चार्जिंगको साथ समस्याहरू छन्। एन्ड्रोइड .9.0.० पाईमा अपडेट गरेपछि समस्याको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस्।
ग्यालेक्सी नोट of को ब्याट्री धेरै सुरक्षित छ, सामसु toका अनुसार
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट battery ब्याट्री पहिले भन्दा सुरक्षित छ। ब्याट्री रक्षा गर्न फर्म ले उठाएको कदमहरू बारे पत्ता लगाउनुहोस्।
Huawei Mate 20 लाइट को पहिलो चित्रहरु यसको पायदान देखाउन
हुवावे मेट २० लाइटको विशेष विवरण र छविहरू फिल्टर गरियो। चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ प्रीमियम मध्य दायराको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
ब्ल्याकबेरी KEY2 LE का विशिष्टता, कम्पनीको अर्को मोबाइल फोन, फिल्टर गरीएको छ
KEY2 को सामान्य संस्करण, ब्लैकबेरी KEY2 LE का सुविधाहरू र प्राविधिक विवरणहरू भर्खरै चुहावट भयो। हामी तपाईंलाई जानकारी दिन्छौं!
ZTE पहिले नै 5G परीक्षण गर्दैछ
ZTE पहिलो परीक्षण चीन मा 5G को साथ आयोजित गर्दछ। यस टेक्नोलोजीको प्रगतिको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन २०१ in मा रोल आउट हुनेछ।
OPPO Find X सुपर फ्ल्यास अगस्ट १ on मा सुरू हुन्छ
OPPO Find X सुपर फ्ल्याश चीनमा अगस्ट १ on मा सुरू हुन्छ। फोनको यस संस्करणको रिलीजको बारेमा अधिक खोज्नुहोस्।
HTC ले एन्ड्रोइड .9.0.० पाई सुविधा पुर्‍याउने पहिलो फोनहरू प्रकट गर्दछ
HTC ले घोषणा गर्छ कुन फोनहरू Android .9.0 .० पाईमा अपडेट हुनेछन्। ब्रान्डको पहिलो फोनहरूको सूची खोज्नुहोस् जुन पहिले अपडेट हुनेछ।
यी सोनी Xperia XZ3 को नयाँ लीकको अनुसार कथित विशेष विवरणहरू हुन्
सोनी Xperia XZ3 को एक नयाँ अफवाह कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटबाट हामीलाई आउँदछ, ती उपकरणको विनिर्देशनहरू हुन सक्छन्।
OPPO Find X Lamborghini चार सेकेन्डमा बिक्छ
विपक्ष खोज्नुहोस् X लेम्बोर्गिनी चीन मा मात्र चार सेकेन्ड मा बेच्छ। उपकरणको यस संस्करणको सफलताको बारेमा बढि खोजी गर्नुहोस्।
सोनीले एन्ड्रोइड .9.0 .० पाई अपडेट गर्ने पहिलो फोन कुन हो भनेर खुलासा गर्दछ
सोनी फोनहरू जुन एन्ड्रोइड .9.0.० पाई प्राप्त गर्नेछ चाँडै नै प्रकट गरियो। कुन मोडेलहरू अपडेट प्राप्त गर्ने पहिलो हुनेछ भनेर खोज्नुहोस्।
सामसुले फेरि एप्पलको नयाँ विज्ञापनका साथ आलोचना गर्दछ
सामसुले फेरि यसको विज्ञापनमा एप्पलको विरुद्ध चार्ज गर्दछ। ग्यालक्सी नोट of को यी घोषणाहरूका साथ कोरियाली फर्मको आलोचनाको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
जुलाई २०१ 10 को १० सब भन्दा शक्तिशाली फोनहरू, एन्टु बेन्चमार्कका अनुसार
AnTuTu ले यस बर्ष जुलाई महिनाको १० सब भन्दा शक्तिशाली स्मार्टफोन्सको रैंकिंग ल्याउँदछ, जसमा सियामी ब्ल्याक शार्क र अन्यहरू छन्।
Xiaomi Mi A2 र Mi A2 लाइट स्पेनमा पहिले नै उपलब्ध छन्
शाओमी मी ए2र एमआई ए2लाइट आधिकारिक रूपमा स्पेनमा सुरू गरियो। स्पेन मा दुई फोन को आगमन को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
LITTLE: Xiaomi को नयाँ प्रीमियम मोबाइल ब्रान्ड
LITTLE: Xiaomi को नयाँ उच्च अंत फोन ब्रान्ड। चिनियाँ फर्मले आज प्रस्तुत गरेको यो नयाँ ब्रान्डको बारेमा अधिक खोज्नुहोस्।
एन्ड्रोइडको लागि एचडी / एचडीआरमा नयाँ फोनहरूको लागि नेटफ्लिक्स
नेटफ्लिक्सले एचडी / एचडीआर कम्प्याटिवल फोनहरूको सूची अपडेट गर्दछ। कुन नयाँ एन्ड्रोइड फोनहरू प्रमाणित हुन्छन् पत्ता लगाउनुहोस्।
पाम कम आकारको फोनको साथ एन्ड्रोइडमा फर्किनेछ
पामले सानो Android फोन सुरूवात गर्दछ। ब्रान्डको नयाँ फोनको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन बजारमा फर्किनेछ।
Bixby 2.0: सामसु'sका सहायक नविकरण गरियो
Bixby 2.0: सामसु'sको सहायक सुधार र नवीकरण गरियो। कोरियाली हस्ताक्षर विजार्डमा भैरहेको परिवर्तनहरूका बारे बढी जानकारी लिनुहोस्।
2 समीक्षा मा YI होम क्यामेरा परिवार पैक 1
हामीले YI होम क्यामेरालाई २-इन -१ "पारिवारिक प्याक" मा परिक्षण गर्‍यौं जुन रोचक कार्यक्षमता प्रदान गर्दछ, सबै कुरा नियन्त्रणमा राख्न एक उत्तम उपकरण।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी वाच: सामसु Samsung वाचको नवीकरण
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी वाच: विशिष्टता, मूल्य र सुरुवात। आज प्रस्तुत कोरियाली ब्रान्डबाट नयाँ घडीको बारेमा अधिक खोज्नुहोस्।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट Orange अब सुन्तलामा उपलब्ध छ
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट9रिम र रोमको यसको दुई प्रकारहरूमा स्पेनको ओरेन्जमा प्रि-अर्डरको रूपमा पहिले नै उपलब्ध छ।
सामसुले कम्पनीको भर्चुअल सहायक बिक्स्बीसँग पहिलो स्मार्ट स्पिकर प्रस्तुत गर्दछ
सामसुले भर्खर आफ्नो पहिलो स्मार्ट स्पिकर प्रस्तुत गरेको छ, र यसलाई ग्यालक्सी होम भनिन्छ। यो Bixby, ब्रान्डको आफ्नै भर्चुअल सहायकको साथ आउँदछ।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट:: विशिष्टता र सुविधाहरू
धेरै महिनाको अफवाह पछि,9अगस्त अन्तमा आइपुगेको छ, जुन मितिमा नोट दायराका सबै प्रेमीहरूले कोरियाली कम्पनी सामसुले भर्खर आधिकारिक रूपमा नयाँ सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट presented प्रस्तुत गरेको छ कि भनेर हेर्नका लागि प्रतिक्षा गरिसकेका थिए, जुन यस वर्ष प्रस्तुत हुनेछ। ।
हुवावे मेट २० मा ,,२०० एमएएच ब्याट्री हुनेछ
हुवावे मेट २० मा ,,२०० एमएएच ब्याट्री हुनेछ। चिनियाँ ब्रान्डको यो नयाँ गिरावट आउने नयाँ उच्च-अन्तको बारेमा अधिक खोज्नुहोस्।
हुवावेले यसको चार फोनमा एन्ड्रोइड .9.0 .० पाईको परीक्षण गर्दछ
हुवावे पहिले नै चार फोनका लागि एन्ड्रोइड .9.0.० पाईमा काम गर्दैछ। चिनियाँ ब्रान्डले तयारीका बारे अद्यावधिक जानकारी लिनुहोस्।
नयाँ लीकले प्रकट गर्न सक्दछ कि शाओमी मी X एक्सको दुई भेरियन्टहरू हुनेछन्, यो एम आई and र एमआई SE एसई हुन सक्दछ।
BQ ले १० फोनहरू Android .10 .० पाईमा अपडेट गर्नेछ। अपरेटिंग प्रणालीको नयाँ संस्करणमा अद्यावधिक गर्न सक्षम हुने फोनहरूको बारे अधिक जान्नुहोस्।
Alldocube X ट्याब्लेट अब ie २१ $ को लागि Indiegogo मा उपलब्ध छ
ट्याब्लेटको बजार, प्रारम्भिक अवधि पछि जुन सबै उत्पादकहरूले बजारमा आ-आफ्नो मोडलहरू ल्याए, कम गरिएको छ केही हप्ताको प्रतिक्षा पछि, एल्डगोब एक्स उपलब्ध इण्डिगोगोमा उपलब्ध क्राउडफन्डिing कम्पनीमार्फत आरक्षणको लागि उपलब्ध छ।
ग्यालक्सी नोट for को लागी फोर्टनाइट अस्थायीबाट नयाँ डेटा
हामीसँग सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट for को लागि फोर्टनाइट अस्थायीबाट नयाँ डेटा छ
Asus Zenfone मैक्स प्रो सेप्टेम्बर मा स्पेन आउने छ
Asus Zenfone मैक्स प्रो छिट्टै स्पेन आउने छ। नयाँ ASUS फोनले शुद्ध एन्ड्रोइडलाई यसको अपरेटिंग प्रणालीको रूपमा प्रयोग गर्दछ।
Oukitel WP2 का सुविधाहरू र विशिष्टताहरू
स्मार्टफोन खरीद गर्दा धेरै प्रयोगकर्ताहरूले बिभिन्न कारकहरूलाई ध्यानमा राख्दछन्, विशेष गरी यदि उनीहरूले यसलाई दिने योजना गरे भने एशियाली फर्म ओकिटलले १०,००० एमएएचको नयाँ टर्मिनल बजारमा ल्याउन लागेको छ। ब्याट्री: ओकिटेल डब्ल्यूपी २
Meizu भर्खरै Meizu १ and र १ Plus प्लस जारी गर्यो। कम्पनीका नयाँ फोनहरूका सबै प्राविधिक विवरणहरू पत्ता लगाउनुहोस्!
Aermoo B3 ब्लूटूथ हेडफोन समीक्षा गर्नुहोस्
हामीले स्ट्राइकिंग एर्मो बी head हेडफोनको परीक्षण गरेका छौं, र यस विश्लेषणमा हामी तपाईंलाई सबै डाटा र केही दिनको लागि प्रयोगको हाम्रो अनुभव बताउनेछौं।
HTC ले १ worst वर्षमा यसको खराब बिलिilling रेकर्ड गर्दछ
जुलाईमा एचटीसीको कारोबार% 77% ले घटे। ताइवान कम्पनी को कारोबार मा कमी को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
फोसिलले आईएफए २०१ its मा आफ्नो नयाँ स्मार्टवाचहरू प्रस्तुत गर्दछ
जीवाश्मले यसको चौथो जेनरेशन स्मार्टवाच आईएफए २०१ will मा प्रस्तुत गर्नेछ। निर्माताको नयाँ घडीहरू चाँडै आउँदैछ भन्ने बारे थप जान्नुहोस्।
क्वालकॉम सेप्टेम्बर मा आफ्नो नयाँ स्मार्टवाच प्रोसेसर परिचय
क्वालकॉमले सेप्टेम्बर १० मा आफ्नो नयाँ स्मार्टवाच प्रोसेसर प्रस्तुत गर्नेछ। ब्रान्डको नयाँ स्न्यापड्रैगनको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
केही सामसु phones फोनले एन्ड्रोइड Oreo प्राप्त गर्न २०१ until सम्म कुर्नुपर्नेछ
सामसुले २०१ phones मा एन्ड्रोइड ओरेओमा केहि फोनहरू अपडेट गर्नेछ। ब्रान्डको अपडेट तालिकाको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस्।
नयाँ छविहरू र पोकोफोन एफ 1 को बारेमा डेटा
नयाँ विनिर्देशहरू र पोकोफोन एफ १ को बारेमा लीक छविहरू। नयाँ शाओमी ब्रान्डबाट फोनको बारेमा अधिक खोज्नुहोस्।
स्मार्टिसन नट प्रो २ एस बक्सले यसको मुख्य सुविधाहरू प्रकट गर्दछ
स्मार्टिसन नट प्रो २ एस का मुख्य सुविधाहरू यसको बक्सको विवरणको लागि भर्खरै प्रकाशमा आएका छन्। तिनीहरूलाई चिन्नुहोस्!
Meizu १ss चीनमा एक मिलियन आरक्षणमा पुगेको छ। तिनीहरूको प्रस्तुतीकरण अघि यी मोडेलहरूको सफलताको बारेमा बढि खोजी गर्नुहोस्।
लीगु एस १० का नयाँ प्राविधिक विवरणहरू पुष्टि भयो
लीगुले यसको अर्को फोन, लिगू एस १० को बारेमा थप विवरणहरू प्रकट गरेको छ। यो एक AMOLED स्क्रिनको साथ र एक डबल रियर क्यामेराको साथ आउनेछ। पत्ता लगाउनू!
शाओमी मी X एक्सको पहिलो छविहरू फिल्टर गरियो
Xiaomi Mi 8X: Mi नोट दायरा को नयाँ उत्तराधिकारी। यस फोनको बारेमा अधिक पत्ता लगाउनुहोस् जसको छविहरू पहिले नै चुहावट भइसकेका छन्।
"Android, Google" आदेशको साथ धेरै Android फोनहरूमा समस्याहरू छन्।
धेरै Android फोनहरूले "Ok Google" आदेश प्रयोग गर्न सक्दैन। यस बगका बारे बढि खोजी गर्नुहोस् जसले धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई असर गर्दछ।
एन्ड्रोइड .9.0.० पाईमा आवश्यक फोन अपडेटहरू
आवश्यक फोनले एन्ड्रोइड .9.0.० पाईमा पहिले नै अपडेट गर्दैछ। फोनको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन अपडेट प्राप्त गर्ने पहिलो हो।
LG Q8 (2018): नयाँ जलरोधक मध्य-दायरा
LG Q8 (2018): विनिर्देशहरू, मूल्य र मध्य-दायराको प्रक्षेपण। कोरियाली ब्रान्डको नयाँ मध्य-दायराको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
यो Razer फोन2२०१ late को अन्त मा सुरू गर्न सकिन्छ
नयाँ रेजर फोन यस बर्षको अन्तमा प्रक्षेपण हुनेछ। बर्षको अन्त्यको लागि ब्रान्डको नयाँ मोडलको सुरुवातको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
गुगलले पिक्सेल of को प्रस्तुतीकरण मिति प्रकट गरेको थियो
गुगल पिक्सेल अक्टुबर presented मा प्रस्तुत गरिने छ। गुगल फोनको आधिकारिक प्रस्तुतीकरणका बारे अधिक जान्नुहोस्।
वनप्लस of को स्क्रीन फ्लिकरिंग ठीक गर्न एक अपडेट जारी गरिनेछ। चिनियाँ निर्माताले सुरूवात गर्ने अपडेटको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
किन ऐ, एन्ड्रोइडको साथ नयाँ झिओमी २ 25 यूरो को लागी
सियाओमीले भर्खरै किन एआई, ब्राण्डको नयाँ एन्ड्रोइड उपकरण सुरू गर्यो जसको परिवर्तनको लागि २ 25 यूरो लाग्छ। यसलाई जान्नुहोस्!
Asus Zenfone 5Z एक नयाँ अपडेटमा विभिन्न सुधार र क्यामेरा सुविधाहरू प्राप्त गर्दछ
बार्सिलोनाको MWC मा फेब्रुअरीको अन्तमा प्रस्तुत गरिएको Asus Zenfone 5Z ले भर्खर फोटोग्राफिक सेक्सनमा सुधारको साथ नयाँ अपडेट प्राप्त गरेको छ।
हुवावे मेट १० ले १० करोड भन्दा बढी युनिटहरू बेचेको छ
Huawei मेट १० को १० मिलियन भन्दा बढी युनिटहरू बिक्री भइसकेका छन्। चिनियाँ ब्रान्डको उच्च-अन्त बिक्रीको बारेमा अधिक जानकारी लिनुहोस्।
नोकिया .5.1.१ प्लस चाँडै नै धेरै देशहरूमा सुरूवात हुनेछ
नोकिया .5.1.१ प्लस चाँडै चीन बाहिर उपलब्ध हुनेछ। उपकरणले भर्खरै ब्लुटुथ प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको छ। हामी तपाईंलाई विस्तार!
ग्यालक्सी नोट pre प्रि-अर्डर फोर्टनाइटमा खर्च गर्न $ १ with० को साथ आउँदछ
ग्यालक्सी नोट pre प्रि-अर्डर फोर्टनाइटमा खर्च गर्न पैसाको साथ आउँनेछ। एपिक खेलहरू र सामसु आफ्नो उत्पादको प्रचार गर्न सेनामा सामेल हुन्छन्।
यो प्रस्ताव को फाइदा लिनुहोस् र सीमित समयको लागि मात्र wi १.9..139,9. for को Chuwi हाय Pro प्रो खरीद गर्नुहोस्
यद्यपि यो सत्य हो कि स्कूलमा फिर्तीको लागि अझै एक महिना भन्दा बढी बाँकी छ र धेरै विद्यार्थीहरू छन् जुन यस शीर्षकको बारेमा सुन्न चाहँदैनन्, यदि तपाईं एकमा एउटा चाखलाग्दो ट्याब्लेट किन्नको लागि प्रस्ताव पर्खिरहनुभएको थियो भने चाखलाग्दो मूल्य भन्दा बढि, Chuwi Hi9 Pro तपाईंले खोजिरहनु भएको जस्तो देखिन्छ
सामसु IFA २०१ 2018 मा नयाँ उत्पादनहरूको साथ हुनेछ
सामसुले आईएफए २०१ 2018 मा नयाँ उत्पादनहरू प्रस्तुत गर्दछ। नवीनताहरूका बारे अधिक जान्नुहोस् जुन फर्मले बर्लिनमा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दछ।
HTC U12 Life को रेन्डर, ब्रान्डको अर्को मध्य-दायरा, फिल्टर गरीएको छ
ताइवानी निर्माताको अर्को मध्य-दायरा स्मार्टफोन, HTC U12 Life को रेन्डर भर्खरै चुहावट भयो। यसलाई जान्नुहोस्!
Xiaomi Mi MIX 2S एन्ड्रोइड पी मा सीधा अपडेट हुनेछ
शाओमी मी मिक्स २ एसले सीधा एन्ड्रोइड पी प्राप्त गर्नेछ। फोनमा छिट्टै नै आउने अद्यावधिकको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
सामसु्गले ग्यालेक्सी S8, S9 र नोट 8 को लागी अगस्त अपडेट जारी गर्दछ
सुरक्षा प्याच अगस्तको यस महिनाको लागि भर्खरै सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S8, S9 र नोट 8 को लागी जारी गरिएको छ।
पूर्ण सैमसंग ग्यालेक्सी नोट Features सुविधाहरु अनावरण गर्नु अघि चुहावट
सामसु'sको ग्यालेक्सी नोट of को टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्सको पूर्ण लिस्ट, ठूलो फोन जुन9presented प्रस्तुत हुनेछ प्रकाशमा आउँदछ सैमसंगको ग्यालक्सी नोट of को टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स आधिकारिक प्रस्तुतीकरणको केही दिन पहिले नै फुटेको छ।
ओप्पो पहिलो कम्पनी हुनेछ जसले हामीलाई कर्निंग गोरिल्ला ग्लास with को साथ मोबाइल ल्याउने छ
ओप्पोले मार्केटमा कर्निंग गोरिल्ला ग्लास with मार्फत पहिलो स्मार्टफोन ल्याउनेछ, भर्खरै घोषणा गरे अनुसार।
गुगल पिक्सेल X XL लीक GeekBench मा: एन्ड्रोइड पी प्रकट भयो
गुगल पिक्सेल X एक्सएल भर्खर गीकबेन्चमा चुहावट भयो। यस उपकरणले एन्ड्रोइड पी, GB जीबी र्याम र आठ कोर कोर क्वालकॉम प्रोसेसरको गर्व गर्दछ।
ग्यालक्सी नोट of को पहिलो घोषणा फिल्टर गरीएको छ
अपेक्षित रूपमा, खास गरी यदि हामी सैमसंगको बारेमा कुरा गर्छौं, जब त्यहाँ केहि दिनहरू बाँकी छन् ...
ओप्पो ए s एस: GB जीबीको रिम + GB२ जीबीको आन्तरिक मेमोरीको नयाँ संस्करणको घोषणा गरियो
ओप्पोले भर्खरै ओप्पो ए ss को नयाँ रिम र आन्तरिक भण्डारण क्षमताको नयाँ संस्करण घोषणा गर्‍यो।
AUKEY प्रस्तुत गर्दछ - सधैं मोबाइलमा ब्याट्रीको साथ »
हामीले पूर्ण AUKEY प्याक परीक्षण गरेका छौं ताकि हाम्रो स्मार्टफोनको ब्याट्री बिदामा छुट्टीहरू समात्न सक्दछ, निश्चित रूपमा ती मध्ये एउटाले तपाईंलाई सूट गर्दछ।
टेनाबाट पार गरिसके पछि हुवावेको मेट २० लाइटको डिजाइन भेट्नुहोस्
Huawei मेट 20 लाइट TENAA बाट पार गरेको छ र प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको छ। यसका लागि धन्यवाद, हामी पहिले नै यसको आधिकारिक डिजाइन जान्दछौं। हामी तपाईंलाई देखाउँदछौं!
GPS कम लागत स्मार्टवाच लियो स्पोर्ट Sp958 समीक्षा गर्नुहोस्। अब कुपन छुट छ धन्यवाद। € .€.56.75 !! को लागि!
शाओमी मी अगस्ट on मा स्पेनमा आइपुग्नेछ
शाओमी मी अगस्ट on मा स्पेनमा सुरूवात हुनेछ। हाम्रो देशमा उच्च-अन्तको प्रक्षेपण मितिको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ट्याब ए १०..10.5 को सुविधाहरू, दक्षिण कोरियालीबाट नयाँ
केही घण्टा अघि सामसुले ग्यालक्सी ट्याब एस presented प्रस्तुत गर्‍यो, जुन फर्मको अहिलेसम्मको सर्वश्रेष्ठ ट्याब्लेट जुन स्न्यापड्रैगन4प्रोसेसर सुसज्जित छ।यस आएको छैन सैमसंगले हामीलाई नयाँ ट्याब्लेट ल्यायो। यो ग्यालक्सी ट्याब ए १०., छ, एक उपकरण जुन क्वालकॉमबाट आठ कोर कोर स्नैपड्रैगन 835० द्वारा संचालित छ।
नयाँ सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ट्याब S4: सुविधाहरू र मूल्य यसलाई जान्नुहोस्!
विश्वको सबैभन्दा सफल स्मार्टफोन निर्माताले हामीलाई यसको नयाँ ट्याब्लेट ल्याउँदछ। हामी ग्यालेक्सी ट्याब S4 को उत्तराधिकारी सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ट्याब S3 को बारेमा कुरा गर्छौं, नयाँ ग्यालेक्सी ट्याब्लेट भेट्नुहोस्: ग्यालक्सी ट्याब S4। यो एक स्न्यापड्रैगन 835। SoC, एक विशाल १०..10.5 इन्च सुपरमोलड स्क्रिन, र अधिकको साथ आउँछ।
सामसु्गले ग्यालक्सी नोट9लाई आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत नगरे पनि आरक्षित गर्न अनुमति प्रदान गर्यो
अगस्त9मा, एसियाली कम्पनी सामसुले आधिकारिक रूपमा ग्यालक्सी नोट9पेश गर्नेछ, र प्राय: धेरै स्पेसिफिकेसनहरू पहिले नै भएको भए पनि यो बिक्रीको लागि उपलब्ध छैन भन्ने तथ्यको बाबजूद सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट9लाई पहिले नै आरक्षित गर्न सक्दछ संयुक्त राज्य अमेरिका।
ग्यालक्सी नोट मोबाइलफन द्वारा लीक भिडियोमा देखा पर्दछ
यद्यपि ग्यालक्सी नोट of को आधिकारिक प्रस्तुतीकरणको लागि अझै एक हप्ता बाकी छ र अझै केही बाँकी छ, छविहरू र भिडियोहरू अझै देखा पर्छन् यदि तपाईं ग्यालक्सी नोट look कसरी देख्नुहुन्छ हेर्न चाहनुहुन्छ भने, मोबाइलफनमा केटाहरूले भिडियोमा पहुँच गरेका छन्। नोट दायराको नयाँ पुस्ताको।
ओप्पो एफ of को पछाडिको डिजाइनले फिंगरप्रिन्ट रिडरको साथ डबल क्यामेराको पुष्टि गर्दछ
ओप्पो एफ अर्को उपकरणहरू हुन् जुन चिनियाँ फर्मबाट सुरू गर्न सकिन्छ। यो पहिले नै एक बरु न्यूनतम र उल्लेखनीय notch खुलासा गरिएको छ अवसर मा ओप्पो F9 दुई नयाँ आधिकारिक पोस्टर को लागी यसको पछि डिजाइन धन्यवाद प्रकट गरेको छ। यो एक दुई र color भेरियन्टहरूमा आउनेछ: निलो र रातो।
शाओमी कम्पनी थियो जुन यस वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा सब भन्दा उच्च वृद्धि हो
आज, बजारमा सब भन्दा प्रख्यात र वजनदार ब्रान्ड मध्ये एक शाओमी हो। यसले केवल शियाओमीको सम्मान र प्राथमिकता कमाउन सकेको छैन, यो चिनियाँ कम्पनी हो जुन यस वर्षको अप्रिल महिना र जून बीचमा सबैभन्दा बढी बृद्धि भएको छ। हामी समाचार विस्तृत!
Oukitel K8 को लागि आरक्षण अवधि अब खुल्ला छ
एसियाली कम्पनी Oukitel हालैका वर्षहरुमा Oukitel K8 को आरक्षण अवधि भन्दा अधिक मूल्य मा धेरै चाखलाग्दा सुविधाहरु संग फोन निर्माण गरेर विशेषता गरिएको छ, सोनी द्वारा निर्मित फोटो फोटोग्राफर सेन्सर र 5.000,००० mAh ब्याट्री संग टर्मिनल।
यस वर्षको दोस्रो क्वाटरमा सोनीले केवल २ लाख फोनहरू बेच्यो
यो वर्षको दोस्रो त्रैमासिकले एक महिना भएको छ, हामीलाई अलविदा भन्यो, केही स्मार्टफोन निर्मातालाई फाइदा पुग्यो जबकि अरूहरू मात्र बाँकी छ।सोनीले वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा मात्र बेचिएको २० लाख युनिट दर्ता गर्‍यो। यो एक गम्भीर पतन प्रतिनिधित्व गर्दछ। पत्ता लगाउनू!
हुवावे विश्वव्यापी दोस्रो सबैभन्दा बेच्ने ब्रान्डको रूपमा छ
Huawei दोस्रो क्वाटरमा बिक्री मा एप्पल भन्दा बढी। विश्वव्यापी रूपमा दोस्रो क्वाटरमा चिनियाँ निर्माताको बिक्रीको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
Huawei 5G मोबाइल एक उन्नत शीतलन प्रणाली प्रयोग गर्दछ
हामी विभिन्न मोबाईलमा G जी टेक्नोलोजी देखेर केही महिना मात्र टाढा छौं। Huawei जस्ता निर्माताहरु पहिले नै एक Huawei को प्रक्षेपण को आधार मा घोषणा गरी सकेको छ 5G नेटवर्क को खपत को कारण गर्मी dissipate गर्न एक तामा प्लेट मा आधारित एक शीतलन प्रणाली प्रयोग गर्नेछ।
एक कल्पित शाओमी मी Explorer एक्सप्लोरर संस्करण कम निशानको साथ TENAA मार्फत जान्छ
एउटा उपकरण जसले यस बर्षमा अहिले सम्म सबैभन्दा ध्यान आकर्षण गरेको छ, र यसको गुणहरू वा लाभहरूको लागि यति धेरै हैन, तर यसको पछिल्लो डिजाइनको लागि सियोमीले टेनामा एउटा उपकरण दर्ता गरेको छ। प्रदान गरिएको डाटाका अनुसार यो एमआई Explorer एक्सप्लोरर संस्करणको संस्करण हुनसक्दछ।
Huawei Mate 20 का धेरै टेक्निकल स्पेसिफिकेसनहरू यसको फर्मवेयरको लागि फिल्टर गरिएको छ
दिनहरू बित्दै जाँदा, चिनियाँ फर्म हुवावेको अर्को फ्ल्यागशिपहरूको बारेमा केही विवरणहरू जारी गरियो, केही Huawei Mate 20 को फर्मवेयरमा निर्भर गर्दै केही घण्टा अघि फुटेको छ। सबै प्राविधिक विवरणहरू खुलासा गर्नुहोस्!
लेनोभोले पहिलो5जी मोबाइल स्नैपड्रैगन 855 XNUMX को साथ सुरू गर्दछ
G जी नेटवर्क मोबाइल फोनमा सबैभन्दा प्रत्याशित कनेक्टिभिटी टेक्नोलोजी हो, किनकि हामीलाई सबैले थाहा छ, यो अहिलेसम्म कहिँ पनि समर्थित छैन। कम्पनीका उपाध्यक्ष, चng चेंngले दिएको भनाइ अनुसार, लेनोभोले हामीलाई पहिलो G जी ल्याउनेछ। स्नैपड्रैगन55 को साथ फोन।
विपक्ष F9: निशानको विकास पहिले नै वास्तविक छ
OPPO F9: नयाँ मध्य दायरा एक धेरै विशेष खाचको साथ। निर्माताबाट यो नयाँ मोडेलको बारेमा बढि जान्नुहोस् जुन चाँडै मार्केटमा आइपर्नेछ।
$ २१। को लागि शानदार Alldocube X ट्याब्लेट पाउनुहोस्
केही हप्ता अघि हामीले एउटा नयाँ ट्याब्लेटको बारेमा कुरा गर्यौं जुन बत्ती, आलडोक्यूब एक्स, एक हेर्न जाँदै ...
हुवावे मेट २० प्रोमा अल्ट्रासोनिक सेन्सर र थ्रीडी फेस अनलक हुने छ
हामी तपाईंलाई नयाँ विवरणहरू बताउँदछौं जुन नयाँ हुआवे मेट २० प्रोको बारेमा प्रकाशमा आएको छ
OnePlus3र 3T ले Android P प्राप्त गर्दछ
धेरै समय अगाडि ओनप्लसले यसको अपडेट तालिका घोषणा गर्‍यो, जसले यसको दुई वर्षको सामान्य अपडेटको ग्यारेन्टी ...
शाओमीले आफ्नै फोल्डेबल फोनमा पनि काम गर्दछ
शियाओमी पहिले नै आफ्नै फोल्डेबल स्मार्टफोनमा काम गरिरहेकी छ। चिनियाँ ब्रान्डको यो फोल्डिंग मोडेल अर्को बर्षमा सुरू गर्ने योजनाहरूको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
सोनी Xperia XZ3 TENAA मा कथित रूपमा चित्रित
सोनीले Xperia XZ3 जर्मनीको बर्लिनको आइएफएमा प्रस्तुत गर्ने छ, प्रख्यात टेक्नोलोजी मेला जहाँ नवीनता उपकरणहरू प्रायः प्रस्तुत गरिन्छ। सोनी Xperia XZ3 भर्खर आधिकारिक TENAA वेबसाइटमा भर्खरै देखा पर्‍यो। यस उपकरणको बारेमा बढि जान्नुहोस्!
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ए (२०१)) मा एक ट्रिपल क्यामेरा हुनेछ
सामसुले ग्यालक्सी ए (२०१)) मा ट्रिपल रियर क्यामेरा पेश गर्नेछ। निर्माताबाट यी फोनहरूको मुख्य सुविधाको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
Oukitel WP2 WP10000 को दोस्रो जेनेरेसन हो
Oukitel फर्म एक ठूलो क्षमताको ब्याट्रीको साथ फोनको दायरा सुरू गरेर विशेषताको साथ छ ...
शाओमी पोकोफोन एफ १ ले यसको ब्लुटुथ प्रमाणीकरण पछि केहि विनिर्देशहरू प्रकट गर्दछ
धेरै नै शाओमीको अर्को उच्च-अन्तको बारेमा अफवाह गरिएको छ। यस उपकरण, Pocophone F1, ब्लूटूथ SIG मा एक यात्रा बनाएको छ, मा Xiaomi Pocophone F1 ब्लूटूथ हस्ताक्षर माध्यम बाट जान्छ र प्रमाणित छ। यस अर्को उच्च-अन्तको स्नैपड्रैगन 845। को साथ प्राविधिक विवरणहरूका बारे अधिक जान्नुहोस्।
सामसुले आफ्नै अनब्रेकेबल स्क्रीन प्रस्तुत गर्दछ
सामसुले एक अटुट स्क्रिन सिर्जना गर्दछ जुन गोरिल्ला ग्लासको प्रतिद्वन्द्वी गर्दछ। कोरियाली ब्रान्डले बनाएको अटुट स्क्रिनको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
यी तीन अजीब घोषणाको साथ, सामसुले आईफोनका केहि कार्यहरू र सुविधाहरूको आलोचना गर्दछ
कोरियाली कम्पनी सामसु ,ले अरू धेरै उत्पादकहरूले जस्तै सामान्यतया एप्पलको आईफोनलाई सन्दर्भको रूपमा देखाउँदछ कि यसलाई तुलना गर्न कोरियाली कम्पनी सामसुले तीन नयाँ घोषणाहरू प्रकाशित गरेको छ जहाँ यसले तीनवटा विशेषताहरू हाइलाइट गर्दछ जुन यसका टर्मिनलहरूले हामीलाई उपलब्ध गराउँदछ र हामी भेट्टाउँदैनौं। आईफोन
यी एन्ड्रोइडमा फोर्टनाइटसँग मिल्ने स्मार्टफोनहरू हुन्
एक हप्ता भन्दा अलि अगाडि, एक्सडीए डेभलपरका केटाहरूले घोषणा गरे कि सबै कुरा स indicate्केत गर्दछ जस्तो देखिन्छ कि सर्वशक्तिमान सामसु Samsungले सम्झौता गरेको छ यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि यदि टर्मिनल फोर्टनाइटसँग मिल्छ कि एन्ड्रोइडमा आउँदछ, तब हामी तपाईंलाई देखाउँदछौं। के मोडेल अनुकूल छन्।
वनप्लस's को स्वचालित चमकले समस्याहरूको कारण बनाइरहेको छ
स्वचालित चमकले वनप्लस screen स्क्रिनमा समस्याहरू निम्त्याउँछ। प्रयोगकर्ताहरूले भोगिरहेका समस्याहरूको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस्।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट of को १२9 जीबी र 128१२ जीबीको मूल्य लीक भयो
अब हामीलाई ग्यालक्सी नोट of को मूल्य र रंगहरू थाहा छ जुन इन्डोनेसियामा आइपुग्नेछ
सम्मान प्ले विशेष संस्करण अगस्त १ मा शुरू भयो
Honor Play विशेष संस्करण अगस्त १ मा जारी हुनेछ। Honor फोनको यो विशेष संस्करणको आगमन बारे बजारमा खोज्नुहोस्।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ट्याब S4 अगस्त १ मा प्रस्तुत गरिने थियो
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ट्याब S4 अगस्त १ मा प्रस्तुत गरिने छ। कोरियाली फर्मको ट्याब्लेटको प्रस्तुतीकरण मितिको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
किरीन 980० अगस्त on१ मा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ
किरीन 980० अगस्त on१ मा आइएफए २०१ 31 मा प्रस्तुत गरिने छ। हुवावेको उच्च-अन्त प्रोसेसरको सम्भावित प्रस्तुतीकरण मितिको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस्।
सम्मान नोट १० अब चीनमा आरक्षित गर्न सकिन्छ
सम्मान नोट १० को आधिकारिक विशेषताहरू पत्ता लगायो। अर्को हप्ता आइपुग्ने चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ उच्च-अन्तको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
गत वर्ष आलोचनाको बावजुद, पिक्सेल3XL निशान अपनाउनेछ र यस्तो देखिन्छ
केस निर्माताहरू नयाँ टर्मिनलहरूमा पहुँच गर्न सँधै पहिलो हुन्छन् जुन बजारमा हिट हुनेछ, कम्तिमा आवश्यक जानकारी। गुगल पिक्सेल and र पिक्सेल X एक्सएलको पहिलो छविहरू एक केस निर्माताबाट लिक गरिएको छ।
ग्यालक्सी टैब एस of को पहिलो भिडियो लीक भयो
ग्यालक्सी ट्याब एस को नयाँ पीढी, आधिकारिक रूप मा प्रस्तुत हुन लागेको छ, यद्यपि यस पल मा, कोरियाली कम्पनीले आफ्नो तिथि को पुष्टि गरीएको छैन ग्यालक्सी ट्याब S4 को पहिलो भिडियो भर्खरै लीक भएको छ, एक भिडियो जसले निरन्तर पुष्टि गर्दछ डिजाईन र फिंगरप्रिन्ट सेन्सरको गायब।
हनर नोट १० मा 10,००० एमएएच ब्याट्री हुनेछ
हनर नोट १० मा 10,००० एमएएच ब्याट्री देखाउने छ। चिनियाँ निर्माताको नयाँ फोनमा भएको ब्याट्रीको बारेमा अधिक खोज्नुहोस्।
यी सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ट्याब A2 XL को विशेषताहरु हुन्
हामी तपाईंलाई अर्को सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ट्याब A2 XL ट्याब्लेटको आधिकारिक विशेषताहरू बताउँछौं
ग्यालक्सी नोट First को पहिलो प्रचार भिडियोहरू
अगस्त On मा, कोरियाली कम्पनी आधिकारिक रूपमा ग्यालक्सी नोट present प्रस्तुत गर्नेछ, टर्मिनल जसमा धेरै थोरै ...
विपक्ष खोज्नुहोस् X सबैभन्दा प्रसिद्ध धीरज परीक्षण पार
OPPO Find X ले जेरीRigE Everything धीरज परीक्षण असफल। ऊ फोनमा खराब नतिजाहरुको साथ प्रख्यात टेस्टबाट गुज्रिरहेको छ।
YI स्मार्टफोन gimbal समीक्षा गर्नुहोस्
हामीले वाईआई स्मार्टफोन जिमबलको परीक्षण गरेका छौं, सबै उपकरणमा तपाईंको मोबाइल भिडियोहरू स्थिर गर्नको लागि। के यसले वाचा गर्छ?
TENAA पुष्टि गर्दछ कि Meizu 16 स्क्रिनमा एकीकृत फिंगरप्रिन्ट सेन्सरको साथ आउँनेछ
हामी चाँडै मेजु १ 16 को प्रस्तुतीकरण हेर्नेछौं, चिनियाँ फर्मको अर्को फ्ल्यागशिप जुन यस अगस्टमा टेना दिन आउँनेछ, मेजा १u मा स्क्रिन अन्तर्गत फिंगरप्रिन्ट रिडरको उपस्थितिको पुष्टि गरिसकिएको छ। हामी तपाईंलाई विस्तार गर्छौं!
हुवावेले आफूलाई चीनमा सब भन्दा बेच्ने ब्रान्डको रूपमा स्थापित गर्दछ
हुवावेले आफ्नो बिक्री बढाउँदछ र आफूलाई चीनमा सब भन्दा राम्रो बिक्रेताको रूपमा समेकित गर्दछ। तपाईंको आफ्नै देशमा ब्रान्डको बिक्रीको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
शाओमी मी Explorer एक्सप्लोरर संस्करण जुलाई 8० मा चीनमा सुरू हुन्छ
शाओमी मी Explorer एक्सप्लोरर संस्करण आधिकारिक रूपमा जुलाई China० मा चीनमा सुरू हुन्छ। हप्ताको गोप्यता पछि, हामीलाई थाहा छ कि यसले मार्केटमा कहिले असर पार्दछ।
VLC Huawei द्वारा समर्थित छैन !! हामी तपाईंलाई भिडियोमा समाधान दिन्छौं र हामी किन यसको व्याख्या गर्छौं
VLC अब Huawei को साथ उपयुक्त छैन र त्यसैले प्ले अनुप्रयोगमा अनुप्रयोग देखा पर्न रोकेको छ। हामी तपाईंलाई यो अवस्था र समाधानको कारण बताउँछौं।
A0722 कोड नाम अन्तर्गत एक ZTE मोबाइल TENAA द्वारा प्रमाणीकरण प्राप्त गर्दछ
संयुक्त राज्य अमेरिकासँग जेडटीईको भर्खरको द्वन्द्वको बाबजुद चिनियाँ फर्मले यसको संचालन विदेशमा रोक्दैन, र यसको मूल देशमा पनि कम। जे होस्, नयाँ ZTE उपकरण TENAA डाटाबेस मा मोडेल कोड A0722 अन्तर्गत दर्ता गरिएको छ। यसको टेक्निकल विशिष्टताको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा अपरेट गर्न ZTE ले यसको नाम परिवर्तन गर्नुपर्दछ
ZTE कार्यमा फर्कनको लागि यसको नाम परिवर्तन गर्न बाध्य हुन सक्छ। अमेरिकी कम्पनीमा लगाईएको सर्तहरूको बारेमा अधिक जानकारी लिनुहोस्।
Huawei P स्मार्ट +: चार क्यामेरा र स्न्यापड्रैगन 710१० को साथ फर्मबाट नयाँ
Huawei भर्खरै P स्मार्ट +, फोटो प्रेमीहरु को लागी बनाएको नयाँ स्मार्टफोन प्रस्तुत गरेको छ। यो उपकरण केही सुविधाहरूको साथ आउँदछ Huawei ले हामीलाई ल्याउँछ P स्मार्ट +, ब्रान्डको नयाँ स्मार्टफोन चार क्यामेरा र क्वालकम स्नैपड्रैगन 710१० को साथ।
एन्ड्रोइडका लागि फोर्टनाइट विशेष रूपमा सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट to मा आउँदछ
फोर्टनाइट पहिलो महिना ग्यालेक्सी नोट exclusive मा विशेष हुनेछ। दुबै पक्षहरू यसको सुरुवातको लागि पुगेका सम्झौताको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस्।
सोनी Xperia XZ3 एक 48MP सेन्सर के साथ आ सकता है
केहि दिन अघि सोनी, जापानी कम्पनीले आफ्नो नयाँ me 48 मेगापिक्सेल रिजोलुसन फोटोग्राफिक सेन्सर प्रस्तुत गर्‍यो। यो सोनी IMX586 को रूपमा परिचित भयो। सोनीको एक उपकरण भर्खर GFXBench मा देखा पर्‍यो। यो सोनी Xperia XZ3, कम्पनीको अर्को प्रमुख हुन सक्छ।
HTC U12 Life: फर्मको अर्को टर्मिनलको कुञ्जी डाटा फिल्टर गरिएको छ
एचटीसीले आफैंलाई धेरै स्थापना गरिरहेको छ वा यसको सट्टामा, यसको यू १२ श्रृंखलामा मात्रै पछि, यसको अर्को उपकरणको महत्त्वपूर्ण डाटा लीक भएको छ, एचटिसी यू १२ लाइफको धेरै विशेषताहरू र प्राविधिक विवरणहरू, ताइवान फर्मको अर्को मध्य-दायरा। फिल्टर गरिएको छ।
Honor Play भारतमा अमेजनका रूपमा आउँछ
Honor Play अर्को महिना भारत आइपुग्छ र अब हामी जान्दछौं कि यो विशेष रुपमा अमेजन मार्फत गर्छ।
सियाओमीले पुष्टि गर्दछ कि त्यहाँ कुनै Xiaomi Mi Max3Pro हुनेछैन
यो पहिले नै आधिकारिक छ: शाओमी मी मिक्स3प्रो लॉन्च हुने छैन। धेरै दिनहरूमा धेरै अफवाहहरूको साथ, हामीसँग फोनमा पहिले नै कन्फर्मेसन छ।
Ulefone आर्मर,, notch संग एक मजबूत मोबाइल, आधिकारिक घोषणा गरीएको छ
Ulefone भर्खरै आर्मर announced को घोषणा गरेको छ, एक शक्तिशाली मोबाइल जुन यस श्रृंखलाको उच्च प्रतिरोध उपकरणहरूमा पहिले देख्न नसकएको नवीनतासहित आउनेछ: Ulefone आर्मर just अगस्त5को लागि भर्खरै घोषणा गरिएको छ, जुन दिन यो आधिकारिक रूपमा सुरू गरिनेछ। युरोपियन बजारमा।
शाओमी रेडमी नोट:: नयाँ GB जीबी + १२5 जीबी संस्करण आउँदछ
शाओमी, रेडमी नोट launched ले सुरु गरेको सफलताको लागि धन्यवाद छ, जुन हामीसँग GB जीबीको रिम र १२5 जीबी रोम शियोमीको नयाँ संस्करण ल्याउँदछ, जुन रेडमी नोट memory मेमोरीको version जीबी रिमको १२6जीबीको आवाश्यक संस्करणको नयाँ संस्करण ल्याउँदछ। जम्मा गर्ने ठाउँ।
LG V20 ले Android Oreo मा अपडेट प्राप्त गर्न सुरू गर्दछ
पछिल्ला दुई बर्षमा, र कम्पनीले सुरू गरेको मोड्युलर स्मार्टफोनको विफलता पछि, यो बिक्रीको मामलामा असफल भयो किनभने यो विचार धेरै नै थियो, एलजी वी २० को एन्ड्रोइड ओरेओमा अपडेट बजारमा आइपुगेको छ, यसको प्रारम्भिक उपलब्धता पछि। दक्षिण कोरिया मा।
ग्यालक्सी A, C र J को Android Oreo मा अपडेट डिसेम्बर सम्म आउँदैन
दुर्भाग्यवस, एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करणहरूमा उनीहरूको उपकरणको अद्यावधिकहरूमा विशेष ध्यान दिन्छ। सामसुले आधिकारिक मिति प्रकाशित गरेको छ जसमा यसको केहि टर्मिनलहरू एन्ड्रोइड ओरियोमा अपडेट हुनेछन्, मिति जुन एन्ड्रोइड पीको सुरुवात पछि हुनेछ।
LG ले LG V90 को नाम पहिले नै दर्ता गरिसकेको छ
LG ले कम्तिमा LG V को पाँचवटा पुस्ता सुरू गर्दछ। कोरियाली फर्मले LG V90 को पंजीकरणको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस्
प्रयोगकर्ताहरूले गुगल पिक्सल २ खोज बारमा समस्या रिपोर्ट गर्छन्
गुगल पिक्सेल खोज पट्टीमा समस्या फेला पर्‍यो। गुगल फोनको साथ प्रयोगकर्ताहरूलाई असर गर्ने यो बगको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस्
सामसु भारतमा सब भन्दा बेच्ने ब्रान्डको ताज हो
सामसु दोस्रो क्वाटरमा भारतमा सब भन्दा बिक्री हुने ब्राण्ड हो। यी तीन महिनामा कोरियाली ब्रान्डको बिक्रीको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
सोनी Xperia XZ3 एक एकल क्यामेरा हुन सक्छ
सोनी Xperia XZ3 एकल क्यामेरा यसको रेन्डरिंग मा देखिएको थियो। फोनको डिजाइन र एकल क्यामेराको उपस्थिति पत्ता लगाउनुहोस्।
मेइजु १ 16 र १ Plus प्लस, चिनियाँ कम्पनीको अर्को प्रमुख जोडी, भर्खर भर्खरै देखा परेको छ टेना, चिनियाँ सर्टिफायर, अर्को मेजु झण्डामा, मेजु १u र १ Plus प्लस, भर्खर टेनामा लीक भएको छ मुख्य विशेषताहरु। तिनीहरूलाई चिन्नुहोस्!
शाओमीले शाओमी मी ए २ लाइट सुरू गर्‍यो, उनीहरूको लागि जो आफ्नो जीवनमा थोरै खालका चाहान्छन् र एन्ड्रोइड वन
यदि तपाईं एमआई A2 परिवारको सस्तो संस्करण चाहनुहुन्छ भने, तपाईंसँग पहिले नै एन्ड्रोइड वनको साथ लाइट छ र त्यो मोबाइलमा स्क्रिनमा विराजमान छ।
शाओमी मी ए2पहिले नै आधिकारिक छ: एक महान मध्य-दायरा, यद्यपि हेडफोनको लागि अडियोजेक बिना
शाओमीले म्याड्रिड शहरलाई यसको लामो प्रतीक्षामा रहेको शाओमी मी ए २, पैसाको लागि ठूलो मूल्यको फोनको ग्लोबल प्रस्तुतीकरणको लागि प्रयोग गरेको छ।
ग्यालक्सी नोट9यस्तो खैरो, निलो र कालो देखिने छ
अर्को प्रोमोशनल छवि भर्खरै फिल्टर गरिएको छ जहाँ हामी नयाँ र colors्गहरू हेर्न सक्दछौं जुनमा ग्यालक्सी नोट9उपलब्ध हुनेछ
Pocophone F1 का विवरणहरू फिल्टर गर्नुहोस्
पोकोफोन एफ १ को पहिलो विशिष्टता फ़िल्टर गरियो। नयाँ शाओमी ब्रान्डको फोनको बारेमा थप पत्ता लगाउनुहोस् जुन हामीलाई थोरै थाहा छ।
सामसु गेमि smartphone स्मार्टफोनमा काम गर्दैछ
अफवाह: सामसुले आफ्नै गेमि smartphone स्मार्टफोन विकास गर्दैछ। कोरियाली फर्मबाट यस फोनको अस्तित्वको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
ग्यालक्सी नोट prices मूल्यहरु यूरोप मा खुलासा
हामीसँग युरोपमा ग्यालक्सी नोट of को मूल्यहरू छ। मुल्यहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन सामसु'sको उच्च-अन्तको दुई संस्करणहरू हुन्छ।
सामसु'sको वेबसाइटले ग्यालक्सी वाचको पहिलो आधिकारिक छविहरू फिल्टर गर्दछ
उपकरणहरू मध्ये एउटा जुन हामीले भर्खरका महिनाहरूमा सबैभन्दा बढी कुरा गरेका थियौं, र त्यो स्मार्टफोन होइन, ग्यालेक्सी वाच, कम्पनीको स्मार्टवाच हो। ग्यालक्सी वाचको पहिलो छवि लीकबाट आएको छैन, तर सामसु website वेबसाइटबाट नै आएको हो। अमेरिका मा।
शाओमी मी अधिकतम Pro प्रो अनलाइन पत्ता लाग्यो
Xiaomi Mi Max3Pro क्वालकॉम वेबसाइटमा देखा पर्दछ। जिओमी फोनको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जुन यो अवस्थित छैन कि छैन भनेर थाहा छैन।
सम्मान नोट १० आन्तरिक मेमोरीको 10१२ जीबीको साथ टेनाले प्रमाणित गर्यो
ह्यानर नोट १० को प्रक्षेपण मिति नजिक आईपुग्दा हामी यस सुविधाहरू र प्राविधिक विवरणहरूको बारेमा पहिले नै थाहा पाउँदछौं ह्यानर नोट १० टेनाबाट पारित भएको छ, चिनियाँ सर्टिफायर र नियामक, लगभग 10१२ जीबी आन्तरिक मेमरीको साथ र विशाल 10 512-इन्च AMOLED स्क्रीन।
सामसुले ग्यालेक्सी नोट9र ग्यालक्सी वाचको लागि संयुक्त चार्जिंग बेस प्रस्तुत गर्नेछ
August अगस्त the मा कोरियाली कम्पनी सामसुले आधिकारिक रूपमा नयाँ ग्यालक्सी नोट9पेश गर्नेछ, जुन बजारमा स्टाइलसको साथ सब भन्दा लोकप्रिय स्मार्टफोन हो। दोहोरो चार्जिंग बेसले उपकरणहरू र उत्पादनहरूको संख्यामा वृद्धि गर्दछ जुन अगस्ट on लाई दिनको उज्यालो देख्न सकिन्छ। सँगै नोट।
यी ग्यालक्सी नोट of को एस पेनका केही कार्यहरू हुन्
केही दिन पहिले, हामी ग्यालक्सी ट्याब एस of का स्पेसिफिकेशन्स प्रतिध्वनित गर्‍यौं, यस उपकरणको फर्मवेयरमार्फत, जसमा यी केहि कार्यहरू हुन् जुन ग्यालक्सी नोट of को एस पेनले हामीलाई प्रस्ताव गर्दछ, ग्यालेक्सी ट्याब एस through मार्फत फिल्टर गरिएको फर्मवेयर
सोनी आईएमएक्स 586 48: नयाँ MP XNUMX सांसद सोनी सेन्सर
सोनी IMX 586 48 XNUMX:: XNUMX MP सोनी क्यामेरा सेन्सर। सेप्टेम्बरमा आउने जापानी ब्रान्डबाट नयाँ सेन्सरको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
LG V40 ThinQ को नयाँ विशेषताहरु पत्ता लाग्यो
LG V40 ThinQ: नयाँ विवरणहरू चुहावट भयो। सेप्टेम्बरमा घोषणा गरिने कोरियाली फर्मबाट नयाँ उच्च-अन्तको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस्।
ग्यालक्सी नोट मा ,9००० एमएएच ब्याट्री हुनेछ
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट of को ब्याट्री ,9००० एमएएचको हुनेछ। कोरियाली ब्रान्डको उच्च-अन्तको ब्याट्रीको बारेमा थप खोजी गर्नुहोस्।
MIUI 10 आज नयाँ शाओमी फोनमा आइपुगेको छ
अधिक सियमी फोन आज MIUI १० मा अपडेट गर्दछ। कुन मोडेलले अनुकूलन तह अद्यावधिक प्राप्त गर्दछ भन्ने बारे थप जान्नुहोस्।
नोकिया .5.1.१ प्लस चाँडै चीन बाहिर बाहिर प्रक्षेपण गर्ने
नोकिया .5.1.१ प्लस चाँडै नयाँ बजारमा थाल्नेछ। चाँडै नै चाँडै हुने चाँडै नै मिड-रेन्जको प्रक्षेपणको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस्।
सम्मान नोट १० जुलाई on१ मा प्रस्तुत गरिने छ
सम्मान नोट १० आधिकारिक रूपमा जुलाई on१ मा अनावरण गरिनेछ। चिनियाँ ब्रान्डको फ्लगशिपको प्रस्तुतीकरण मितिको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
OnePlus3र 3T जुलाई सुरक्षा अपडेट रिलिज भयो
वनप्लसले वनप्लस and र T टीमा नयाँ अपडेट जारी गरेको छ, कम्पनीका पूर्वज वर्षका दुई फ्ल्यागशिपहरू, जुन वनप्लस प्याचको साथ आउँदछ, जुन जुलाई महिनामा वनप्लस and र T टीका लागि सुरक्षा अपडेट जारी गरिएको छ र यसका साथै केही साना सुधारहरू पनि छन्। ।
ग्यालक्सी एस of को बिक्री वर्षको दोस्रो क्वाटरमा घट्यो
ग्यालक्सी एस of को बिक्री दोस्रो क्वाटरमा कम छ। कोरियाली फर्मको उच्च-अन्तको खराब बिक्रीको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
सोनी Xperia XZ2 प्रीमियम सेप्टेम्बर को अन्त मा यूरोप मा आउँछ
Xperia XZ2 प्रीमियम सेप्टेम्बर को अन्त मा यूरोप मा आउने छ। युरोपमा सोनीको उच्च-अन्त प्रक्षेपणको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
नोकिया .5.1.१ प्लस बिक्रीको पहिलो दिनमा बिक्री भयो
नोकिया .5.1.१ प्लस चीनमा बिक्रीको २ 24 घण्टामा बिक्री हुन्छ। चीनमा ब्रान्डको मध्यम-दायरा बिक्रीको बारे अधिक जान्नुहोस्।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट जुलाई २०१5सुरक्षा अपडेट प्राप्त गर्दछ
यद्यपि केहि टर्मिनलहरू बजारमा केही समयको लागि रहेको छ, स्यामसंगलगायत केही निर्माताहरूले कोरियाली कम्पनी सामसु Samsungको बारेमा पूर्ण रूपमा बिर्सिएको छैन स्यामसंग ग्यालेक्सी नोट5को लागि सुरक्षा अपडेट ल्याउन थालेको छ।